Bacda sheer sanduuqa sanduuqa Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Boorsada Sheertainer ee sanduuqa Warshad
5 litir bacda jeelka 'ultrasound' waa weel cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda Sanduuqa iyo faa'iidooyinka hagaagay ee weelasha adag ama kuwa adag, taas oo ka dhigaysa bedelka ugu habboon dhammaan xulashooyinkaas. Waxay ka kooban tahay jubbadda-qaabeeya, bac balaasti ah oo lakabyo badan leh, qasabad, dabool ama waalka iyo kartoon kartoon ah.
5 litir bacda jeelka dhejiska ah ayaa laga sameeyay balaastiig badan. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) waa mid laastik ah una adkaysanaya jeexitaanka.
Bacda baakadaha Adblue ee sanduuqa ku jirta waa weel cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda Sanduuqa iyo faa'iidooyinka hagaagay ee weelasha adag ama kuwa adag, taas oo ka dhigaysa bedelka ugu habboon dhammaan xulashooyinkaas. Waxay ka kooban tahay jubbadda-qaabeeya, bac balaasti ah oo lakabyo badan leh, qasabad, dabool ama waalka iyo kartoon kartoon ah.
Baakadaha Adblue waxaa laga sameeyay balaastiig badan. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) waa mid laastik ah una adkaysanaya jeexitaanka.